Umjovo wokugoma uzokhishelwa izaguga ngesonto elizayo | Scrolla Izindaba
Umjovo wokugoma uzokhishelwa izaguga ngesonto elizayo
U-Everson Luhanga no-Arthur Greene
Uhulumeni uzoqala ukukhipha umgomo we-Pfizer kubo bonke abaneminyaka engaphezu kwamashumi ayisithupha ekuqaleni kwesonto elizayo.
Umthombo ongaphakathi kumkhandlu kazwelonke we-coronavirus utshele i-Scrollla.Africa ukuthi uhulumeni uzothatha izinyathelo ezimbalwa ukunciphisa ukusabalala kwe-Omicron.
UNgqongqoshe Wezempilo uDkt Joe Phahla uzomemezela izibuyekezo mayelana nokukhishwa komgomo we-Pfizer ezinsukwini ezizayo.
Kanye nama-booster shots, kanti imibuthano emikhulu yabantu izovinjelwa.
Kodwa-ke, amabhizinisi – okuyizindawo zokudlela kanye nemboni yotshwala – azovunyelwa ukuhlala evuliwe ukuvikela umnotho wezwe.
Umthombo wengeze ngokuthi uhulumeni ukholelwa ekutheni ukuthelelana kuzosimama uma izikole zivalwa ngamaholidi ngasekupheleni kwale nyanga.
Bangeze ngokuthi uhulumeni usibhekisise kakhulu isibalo sokuthelana okusha sababhaliswa usuku nosuku.
“Uma ukuthelelana kusakhula, uMengameli uzomemezela izinyathelo ezinqala, kodwa ngeke ziwuvimbezele umnotho ontengantengayo njengamanje,” basho kanje.
Bangeze ngokuthi emsebenzini wabo njengodokotela, abantu abaningi asebegonyiwe abathola leli gciwane banezimpawu ezingathusi.
“Labo abangagonyiwe yibona abashayeka kakhulu,” besho.
Abantu abatheleleke igciwane elisha elihlukile le-Omicron baqalwa izimpawu ebeziyivelakancane kwigciwane elihlukile langaphambilini. Lezi zimpawu zihlanganisa ubuhlungu bemisipha, ikhanda kanye nobuhlungu bomzimba.